Dura dhaabbachuun diinummaa:-Hiriira Jimaata Alanaa Adoolessa 21,2018 gaggeeffamu ilaalchisee – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDura dhaabbachuun diinummaa:-Hiriira Jimaata Alanaa Adoolessa 21,2018 gaggeeffamu ilaalchisee
Dura dhaabbachuun diinummaa: Hiriira Jimaata Alanaa Adoolessa 21,2018 gaggeeffamu ilaalchisee
Share gochuun wal qaqqabsiisaa! Keessaniis walii ergaa!
Karooraaf ajandaa jaarmiyaa qabsoo Oromoo gara biraa keessa seenanii bircuun, wal dura dhaabbachuuf diinummaa babal’isuun akeeka diina Oromooti! Ilmaan Oromoo cunqursaa abbaa irree jalaa baasuuf sochii roga maraa gochaa kan ture Qeerroo Bilisummaa Oromoo, akeeka qabsaa’ota ganamaa warra Shinniigaatti wareegamaniif gammoojjiitti lubbuun darbes kanneen Bilisummaa Oromoof aarsaa kaffalan sana galiin gahuuf kallattii isaaf aanjaa’uun warraaqaa turuun beekamaadha warraaqaas jira.
Qeerroo dura dhaabbachuudhaaf hanga nuti Hiriira Waamnutti hiriirri bahamuu hinqabu jechuun duulli kallattii maraan Qeerroo irratti baname waggoota lakkoofsiisaa jiraatuus akeekaaf ajandaa Qeerroo gidduu seenanii dura dhaabbachuun diinummaa uummata Oromoof qaban raageessa jiraatuu aktiivistootaa himuu feena.
Hiriirri Jimaata alana bahamu, sochii karaa nagaan ilmaan Oromoo mannisaanii Liyyuu Ayilii Sumaalee maqdhahatee barbaadaa’eef sagalee ta’uun ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu kan jedhuun ala, ajandaa jeequumsaa qabatee kan socho’aa jiru akka hintaane himuu feena. Nuti qabsaa’oonni Bilisummaa Oromoo biyya abbaa keenya keessatti sochii karaa nagaa gochuuu keenya qofaaf kallattiin uummata Oromoof dhaabbachuun falmuu qofaaf holola nurratti banamee turuu kan yaadatamu ta’uuf akeekaaf ajandaa keenya irra deddeebiin Diaasphooraa biyyoota alaarraa jireenya dhuunfaa gaggeeffataniif Wayyaanee waliin kanneen michummaa qabanis nu dura dhaabbachuun irratti hojjetuu daneessan. Qabsoo walii dura dhaabbachuun diinummaa uummataaf qaban raageessaa jiru. Oromoof sagalee ta’uu keenya kan jibbu isa ajjeefamuu Oromootti gammadu ta’uu beeksisa, hiriirri guddaan Qeerroon Jimaata alanaa qopheesse naamuusa gahaadhaa akka itti fufu himuun barbaada! Qaamonni hiriira kan jala dhaabbattan kanneen gufuu qabsoo Oromoo taatan ta’uu hubachiisa
Waan aja’ibaati Tunis.sissii Hoqqii jettee cittoon.amasii tunii Tanaa tanii biroo ganaa jedhaa jirtii Habashoon
This religious conman still talks shit.
What is wrong with these people!!!What do you do when you are talking to CRAZY?
“Dubbii Zamana Masaafint nutti fidaa jiru. Kana jabeessinee eeggachuu qabna. Aanaa fi konyaadhaan nu qoqqooduu barbaadu. Garaagarummaa amantiitiinis nu seenaa jiru. Hunda caalaa kan nu diiguu danda’u ammoo iasa kana. Gaafa cunqursaan amantii ture sanillee ummanni keenya wal dhabee hin beeku. Waliin nyaata, waliin dhuga, waliin jiraata. Eenyu akka amantiidhaan nu qoqqoodaa jiru sirriitti qorannee saaxiluu qabna. Sadarkaa naannoo keenyaa irraa bahees sabaan wal qoqqooduun, Amaaraa Oromoo… waliin jechuun yaaddoo dha.”
Obeleeyyan keenya Wolloo irraa gara cinaqsan demaa jiran Qeyroon Harar,Awadayii,Komboolcha irraa isaaan simatanii waliin demaa jirra – https://t.co/U2jupWOCsq pic.twitter.com/mczpP7chIE